समानान्तर Samanantar: January 2009
Posted by Govinda at 1/24/2009 09:10:00 AM No comments:
कलङ्कबाट जोगिन सरकारले हत्यारा पत्ता लगाएर न्यायालयमा पुर्‍याउनु पर्छ।
दैनिकी अखबारबाट सक्रिय पत्रकारितामा फर्केको थाहा दिंदा स्विडेनकी एक महिला मित्रले चिन्ता प्रकट गर्दै लेखेकी थिइन् - निकै जोखिमी छ हैन र तिम्रो मुलुकमा पत्रकारिता। लिना भोनसेठ रगमार्क इन्टरनेसनलका लागि काम गर्छिन् र अफगानिस्तानमा रगमार्कको विस्तार गर्ने अभियानमा लागेकी छन्। रगमार्क इन्टरनेसनलको बैठकमा लिना हालै काठमाडौमा आएकी थिइन्। अफगानिस्तानमा लामो समय बसिसकेकी लिनालाई यस भेगका बारेमा धेरै थाहा रहेछ। मैले उनलाई आधा र आधा आफैंलाई आश्वस्त पार्दै लेखेको थिएँ - स्थितिमा सुधार भइरहेको छ। अब पहिलेजस्तो जोखिम नहोला।
म गलत साबित भएजस्तो लाग्यो उमा सिंहको हत्याको घटनाले। उमाको हत्याले सिङ्गो सञ्चारजगत् हल्लियो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला। सबैका लागि एउटा त्रासद दु:स्वप्न हुनपुग्यो यो घटना। हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारलाई पत्रकार महासंघको अगुवाइमा दबाव पनि सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैं अग्रसर भएर दोषीमाथि कारबाही गर्ने वाचा पनि गरेछन्। उनले पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसँग थप भनेछन् - घटनालाई पुराना कुरासँग जोडेर नहेर्नुहोला। यो उनको आग्रह, आदेश वा धम्की के थियो भेटघाटमा सामेल हुनेले बताएका छैनन्। तैपनि घटनाको प्रकृतिले दाहालको भनाइलाई पूरै पत्याउने ठाउँचाहिं दिएको छैन।
उमा सिंहका बाबु र दाजुलाई माओवादीले अपहरण गरेर बेपत्ता पारेका रहेछन्। उमाको पारिवारिक सम्पत्ति पनि माओवादीले लुटेका रहेछन्। हक्की स्वभावकी उमामा माओवादीप्रति कटुता हुनु अस्वाभाविक होइन। आफन्त मारिएकाको मनमा के हुन्छ भन्ने त्यस्तै भोगेकालाई थाहा हुन्छ। उनले माओवादीका दबंग नेता मातृका यादवको ज्यादतीका विरुद्ध पत्रपत्रिकामा लेखेकी पनि रहिछन्। अनि उमा मारिइन्। यस अवस्थामा त घटना पुराना कुरासँग आफैं जोडिन्छ । कसैले जोडिरहनै पर्दैन।
उमाको हत्यालाई राजनीतिक रङ्ग दिनु हुँदैन। यसमा सिङ्गो माओवादी पार्टीलाई मुछ्नु पनि उचित नहोला । तर अपराधीलाई माओवादीले राजनीतिक संरक्षण पनि दिनु हुन्न नि। अपराधीलाई जोगाउने, लुकाउने अनि ´हामीलाई नमुछ´ भन्ने? त्योचाहिं मिल्दैन।
प्रधानमन्त्री दाहालका कुरा सुनेपछि माओवादीलाई शंकाको सुविधा दिउँ जस्तो लाग्यो। तर परिबन्दले शंकाको सुई उतै फर्काइरहेको छ। नयाँ शिक्षा लागू हुनुभन्दा पहिले एसएलसीको पाठ्यक्रममा पुष्कर शमशेरको कथा ´परिबन्द´ पनि पढ्नु पर्थ्यो। दाहालजीलाई पनि सम्झना हुनुपर्छ। कसरी रनेमाथि हत्याको शंका गर्ने परिबन्द मिलेको थियो। उमाको परिवारलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने माओवादीका स्थानीय नेता र कार्यकर्तामाथि उनको हत्याको पनि आरोप लाग्नु अस्वाभाविक हो र? राजनीतिक रङ्ग पटक्कै नदिई अपराधको अनुसन्धान गर्ने हो भने प्रहरीले सबैभन्दा पहिलो शंका त उमाका बाबु र दाजुलाई बेपत्ता पार्नेमाथि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धान न माओवादीमा मात्र केन्द्रित र सीमित गर्नु उचित हुन्छ न उनीहरूलाई शंकाको घेराबाट बाहिर राख्नु नै जायज हुन्छ। तैपनि अपराध शास्त्रअनुसार त उमाको हत्यामा मुख्य शंका उनका बाबु र दाजुका अपहरणकारीमाथि जान्छ नै।
उमाले बाबु र दाजुको हत्याको मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएकी रहिछन्। ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेपछि आरोपीहरूसँग सोधपुछ त हुनैपर्ने हो नि। कर्तव्य ज्यान सरकारवादी मुद्दा हो। यसैले मुद्दा अगाडि बढाउने दायित्त्व पनि सरकारको हो। प्रहरीले उमाको किटानी जाहेरीमा के कारबाही गर्‍यो त? जाहेरीमा परेका व्यक्तिहरू माओवादी कार्यकर्ता हुन् कि हैनन्? यो मुद्दा अदालत पुर्‍याइयो कि पुर्‍याइएन? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ भने मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारले खोज्नु खोतल्नुपर्छ।
कति आतङ्क रहेछ तपाईको पार्टीको एउटी असहाय विधवाको छोरी मारिंदा पनि गाउँलेहरू आँसु पुछ्न जान सक्ता रहेनछन्। सिरहाबाट जनकपुर उनी एक्लै आइछन्। तपाईँलाई लाग्दो हो ती निमुखा गाउँलेहरू सबै तपाईँका समर्थक भएकाले ´वर्गशत्रु´ को दु:खमा रमाएका होलान्। होइन महाशय! ती त आतङ्का कारण जिउँदै मरेसरह भएका हुन्।
सञ्चारकर्मीहरूमा व्याप्त एक प्रकारको त्रास र आक्रोशका कारणले पनि घटनामा माओवादीलाई मुछिहाल्न नहुने नै देखिन्छ। यो घटना माओवादीको नभएर अपराधी गिरोहको कर्तुत साबित भयो भने सञ्चार जगतमा व्याप्त आतङ्क केही मात्रामा कम हुनेछ। यसैले पनि घटनालाई राजनीतिक रङ्ग दिनु उचित हुँदैन। तर पत्रकारले लेख्दैमा वा नलेख्दैमा माओवादी शंका मुक्त हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। भरपर्दो अनुसन्धान गरेर अपराधी पक्रन नसकुन्जेल माओवादी पनि शंका मुक्त हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारलाई अनुरोध गरेजस्तै अपराध अनुसन्धानका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि तताउनु पर्‍यो। अनिमात्र उनका कुरामा विश्वास गर्न सकिएला।
प्रधानमन्त्री दाहालले घटनामा माओवादी संलग्न नभएको भन्दै सफाइ दिने र पछि दोषीलाई कारबाही गर्ने कबुल गर्ने अनि अपराधीलाई उनका मन्त्री र पार्टीका नेताले संरक्षण दिने गरेका उदाहरण धेरै नै छन्। रामहरि प्रकरणमा होस् वा स्युचाटारका युवकहरूको हत्यामा पहिले माओवादीको संलग्नता ठाडै अस्वीकार गरिएको थियो। पछि अपराधीलाई कारबाही गर्ने वचन दाहालले दिएका थिए। तर कारबाही त भएन। घादिङमा मारिएका स्युचाटारका तन्देरीलाई मलेखुबाट अपहरण गर्नेमाथि के कारबाही भयो? प्रहरीले मुद्दा दायर गर्‍यो कि गरेन? विवेकको खुट्टा काट्नेका विरुद्ध के कारबाही भयो? ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दायर गरियो कि गरिएन? मुद्दा सरकारवादी हुने हुनाले प्रहरीले आफ‍ैं पनि अनुसन्धानमा अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो? देखाएको छ त? सम्बद्ध पक्षले प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ भनेर पत्याएको छ? अरूका कुरा किन गर्ने के गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको ज्यान लिनेमाथि कारबाही भएको लागेको छ?
प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ निकै भावुक हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। उमा हाम्रो सन्तानकी दौंतरी अर्थात् छोराछोरीकी उमेरकी रहिछन्। उनकी आमाको अवस्था त हामी पुरुषले कल्पना पनि गर्न सक्तैनौ। तैपनि उनका ठाउँमा आफूलाई राखेर एक छिन सोच्नुस् त। तपाईँ विज्ञानको विद्यार्थी, त्यसमा पनि मार्कसवादी कम्युनिस्ट, आद्यात्मिक त हुनुहुन्न होला तर हृदय छ नि हैन? तपाईँको मनले के भन्छ? आखा रसाउँदैन उमाकी आमाको बिलौनामा? कति आतङ्क रहेछ तपाईको पार्टीको एउटी असहाय विधवाको छोरी मारिंदा पनि गाउँलेहरू आँसु पुछ्न जान सक्ता रहेनछन्। सिरहाबाट जनकपुर उनी एक्लै आइछन्। तपाईँलाई लाग्दो हो ती निमुखा गाउँलेहरू सबै तपाईँका समर्थक भएकाले ´वर्गशत्रु´ को दु:खमा रमाएका होलान्। होइन महाशय! ती त आतङ्का कारण जिउँदै मरेसरह भएका हुन्।
जेहोस्, उमालाई अब कसैले कुनै पनी मूल्यमा बिउँताउन सक्तैन। सरकारले सहिद घोषणा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ छैन। उमाका प्रति सहानुभूति र कर्तव्यको ख्याल छ भने, इतिहासलाई उत्तर दिनुपर्छ भन्ने ठान्ने हो भने सके उनका बाबु र दाजुका हत्यारामाथि पनि कारबाही गर्नुस्। नभए उमाको हत्यारा पत्ता लगाउनुस् र न्यायालयमा उभ्याउनुस्। नत्र इतिहास नबन्दै कठघरामा आफैं उभिनुपर्ने दिन आउन सक्छ। विज्ञेषु किमधिकम्?
Posted by Govinda at 1/18/2009 08:14:00 AM No comments:
राष्ट्रपतिका ´व्यक्तिगत पाहुना´ले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्नु हुन्थ्यो त?
गएको साता भारतको समाजवादी पार्टीका नेता नेपाल आएका थिए। उनीहरू राष्ट्रपतिको ´व्यक्तिगत पाहुना´ का रूपमा नेपाल आएको जानकारी सञ्चार माध्यमले दिएका छन्। शितलनिवास (राष्ट्रपति भवन)ले भने केही भनेको छैन। राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुना जनचासोको विषय होइन भन्ने ठानिएको हो वा जनतालाई जानकारी किन दिनुपर्‍यो र भनेर हेपिएको हो?
राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुना भनिए पनि मुलायम सिंह र अमर सिंह सामयिक भारतीय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। उनीहरू ऐरेगैरे भएको भए सञ्चार माध्यमले ध्यान दिने थिएनन्। राजनीतिक गतिविधि पनि हुने थिएन। राष्टपतिको निम्तोमा आएका पहुनाको भ्रमण बारे जनतालाई सूचना दिने दायित्त्व शितलनिवास कै हो। यद्यपि, यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि उत्तिकै चनाखो र संलग्न हुनुपर्ने हो। उनीहरूलाई बोलाउँदा सरकारसँग सल्लाह भएको थियो कि थिएन? सरकारसँग सल्लाह नगरी व्यक्तिगत पाहुना बोलाउन हुने कि नहुने?
उनीहरूले पशुपति प्रकरणमा सामान्य कूटनीतिक मर्यादा नाघेर टिप्पणी गरे। राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुनाले देशको आन्तरिक मामिलामा दबावमूलक टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित? राष्ट्रपतिले भारतीय मित्र गुहारेर सरकारका विरुद्ध बोल्न लगाएको आरोप लगायो कसैले भने? त्यसमा राष्ट्रपति भवन मौन रहँदा शंका त लाग्छ नै।
सिंहहरू भारतीय भएकाले सजिलै भयो होला तर तेस्रो मुलुकबाट व्यक्तिगत पाहुना आउँदा के गर्ने? अहिले राष्ट्रपतिका निजी पाहुना आए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यक्तिगत पाहुनाका बारेमा कस्तो व्यवहार गर्ने? प्रधानमन्त्री दाहालका ´कम्पोसावाला कमरेड´हरू व्यक्तिगत पाहुना भएर नेपाल आएर क्रान्तिका कुरा गरे भने भारतले सहला कि नसहला? वा अरूका लागि सहज होला कि नहोला? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरूको उत्तर शितलनिवास र सरकारले दिनु आवश्यक छ।
राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत पाहुनाको सम्मानमा दिवा भोज दिइन् सुजाता कोइरालाले। डा‌. यादवका पाहुना नेपाली कांग्रेसका निकट हुनु अस्वाभाविक होइन तर अब राष्ट्रपति यादवचाहिं कुनै दलको नजिक वा टाढा हुन मिल्दैन।
संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको ´संवैधानिक राजा´चाहिं होइन। राजाका व्यवहार सामन्ती परम्पराबाट निर्देशित हुन्थे। राष्ट्रपतिले ती सबै सामन्ती संस्कार स्याहार्न सकार्न हुँदैन थियो।
भ्रमणका सन्दर्भमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भयो कि भएन? राज्यको कोषबाट भएको सबै खर्च पारदर्शी हुनैपर्छ। र खर्च गर्नेले उत्तरदायित्त्व बहन पनि गर्नैपर्छ। त्यस्तो खर्च भएको रहेछ र कुनै कारणले बेरुजु भएछ भने मूल जिम्मेवारी कसले लिने? कि राष्ट्रपतिलाई मुछ्ने त्यसमा पनि?
डा. रामवरण यादवको छवि अझैसम्म उज्यालो छ। उनलाई जनताले अविश्वास गरेको देखे सुनेको छैन। तर यस्तो अपरादर्शी व्यवहार हुन थाल्यो भने सधैं यही अवस्था रहँदैन। राष्ट्राध्यक्षका प्रति नै अविश्वास उत्पन्न भयो कसको भर पर्ने?
राष्ट्रपतिको पद नेपाली समाजमा नयाँ हो। यस संस्थालाई गरिमामय बनाउने दायित्त्व अहिले मूलत: राष्ट्रपति यादवको हो र उनलाई सघाउन राज्यले ठूलै संयन्त्र बनाएको छ। त्यसको काम राष्ट्रपतिलाई सघाउनु हो। यसै पनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका राष्ट्रपतिले हिन्दू राजाको जस्तै सांस्कृतिक भूमिका पूरा गर्न थालेको सुहाएको छैन। संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको ´संवैधानिक राजा´चाहिं होइन। राजाका व्यवहार सामन्ती परम्पराबाट निर्देशित हुन्थे। राष्ट्रपतिले ती सबै सामन्ती संस्कार स्याहार्न सकार्न हुँदैन थियो। यस्तै विषयमा हो राष्ट्रपतिलाई सल्लाह र सुझाव चाहिने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति यादवलाई भेट्दा कांग्रेससँग सम्बन्ध सुधार्न सहयोग माग्ने गरेको भान परेको छ। राष्ट्रपतिलाई दलगत राजनीतिमा मुछ्न हुन्न भने उनले पनि कांग्रेसको मोह छाड्नुपर्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटपछि जनतालाई जानकारी नदिइने गरेकाले भ्रम पर्ने गरेको छ। भ्रमले कसैको भलो गर्दैन। यस्तै पशुपति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई उक्साउने प्रयास पनि भएको देखियो। त्यो पनि उचित थिएन। सरकारले संविधान मिचेकाअवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिको मूल सल्लाहकार सरकार नै हो र हुनुपर्छ। राष्ट्रपति पहिले मर्यादामा रहनुपर्छ।
राष्ट्रपति नयाँ संस्था भएकाले यो स्थिति बसाउने बेला हो। यही बेला बेथिति भए पछि पछुताउनु पर्नेछ।
यादवपछि हुने राष्ट्रपतिले धेरै विषयमा उनकै पदचिन्ह पछ्याउनु पर्नेहुन्छ। यसैले गलत चलन सुरु नगरौं। यस्तै अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक भएमात्र गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ। र लोकतान्त्रिक हुन पारदर्शी र उत्तरदायी त हुनैपर्छ।
खोट नियतमा कि नियतिमा?
गएको सोमबार कलङ्की चोकमा यो फोटो खिच्दैगर्दा मैले झलक्क माओवादी नेताहरू तिनमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्झें। यी फेरीवाल जस्तै दाहालपनि अनुहार लुकाएर चर्को स्वरमा बोल्छन्। ´छिनमा तोला छिनमा मासा´ उनको पहिचान हुन पुगेको छ। कहिले संसारै शत्रु देख्छन् त कहिले तिनैलाई सहयात्री ठान्छन्। यो उनको विवशता हो कि बेइमानी छुट्ट्याउनै कठिन भयो।
पशुपति पुजारी प्रकरणमा निर्णय गर्दा ढंग नपुर्‍याएका कारण विवाद बढी भएको हो। उनले पहिले नै अदालतको आदेश मान्ने तत्परता देखाएको भए भारतीय दबावका अगाडि निहुरिएको सन्देश जनसमक्ष पुग्ने थिएन। नेपालका प्रधानमन्त्रीको मान मर्दन हुँदा रमाउन सकिंदो रहेनछ। दाहालको राजनीतिको समर्थन नगर्नु बेग्लै हो तर समसामयिक राजनीतिक क्षीतिजमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि संसारले पत्याउने नेपाली दाहाल नै हुन्। सदुपयोग गर्न सके उनको व्यक्तित्त्व नेपालको सम्पत्ति हो। दु:ख लागेको छ, दाहालको व्यक्तित्त्व असिनासरी बिलाएर जाँदा। हेर्दाहेर्दै बिलाइरहेको छ उनको व्यक्तित्त्व। हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नेपाली बानीले दाहालको पनि देखियो। संविधान, कानुन र प्रचलनसँग नबाझिउन्जेल मात्र पार्टीका कार्यसूचीबाट प्रधानमन्त्री निर्देशित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री मुलुकको सबैभन्दा बढी दायित्व भएको संस्था हो। यसैले साझा हुन सिक्नुपर्छ। सक्नुपर्छ। साझा हुन नसक्नेले प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु हुँदैन।
माओवादीको नियत र नियति दुबै राम्रो देखिएन। दाहाललाई लाग्दो हो यत्रो ´जनयुद्ध´ गरेर आएपछि पनि यिनै पुराना नियम र प्रक्रिया पछ्याउने हो भने के अर्थ रह्यो त बनवासको? मदनकृष्ण शिक्षक र हरिवंश विद्यार्थी। मदनकृष्णले बेन्चमा उभिने सजाय दिएपछि हरिवंशले ´बेन्चमा उभिन पर्ने भए त एसएलसी पास गरेको त कामै लागेन नि´ भनेको। एउटा सिनेमाको प्रहसनजस्तो स्थिति पो भयो त। उनी प्रधानमन्त्री भएको अन्तरिम संविधानअनुसार हो। त्यसैले त्यसको अक्षर र भावना दुबैको सम्मान गर्नु उनको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्रीले नै संविधानलाई घाँडो ठान्ने हो भने अरूले झन् किन मान्ने? प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालका हालका भनाइहरू कतै यही सोचबाट प्रेरित त हैनन्? अन्यथा कटुवाल पनि निश्चित मर्यादामा बस्नै पर्ने हो। प्रधानसेनापतिले राजनीतिक भाषण दिन हुँदैन तर कांग्रेसलाई के भएको हो कुन्नि उनैलाई उक्साउने काम गरिरहेको छ। सेनाले सरकारलाई नटेर्दा होलेरी काण्ड भएको थियो भन्ने कति चाँडै बिर्सेको हो कुन्नि!
यतिखेर बीपीले २०३६ सालमा सानातिना आन्दोलनविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति सम्झन्छु। जनमत संग्रहको घोषणापछि सबै समूहले आआफ्ना माग राखेर आन्दोलन चर्काएका थिए। पञ्चायती सरकार लाचारजस्तै भएको थियो। टुँडीखेलमा भएको पहिलो कार्यक्रममा बीपीले भने त्यस्ता आन्दोलन सम्झाउँदै सरकारलाई माग पूरा नगर्न चेतावनी दिनुभयो। कम्युनिस्टले आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए। धेरैलाई लाग्यो त्यसले कांग्रेसको समर्थन घट्छ। कुरा बुझाउँदै पछि बीपीले भन्नुभएको थियो - क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितप्रति उदासिन र गैरजिम्मेवार हुन हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहाल बीपीजत्तिकै माथि उठ्न त सकोइनन् तर उनले पार्टी स्वार्थका तुलनामा राष्ट्रिय हित रोजे भने धेरै समस्या सजिलै समाधान हुनेछन्। के दाहाल राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिएलान्?
Posted by Govinda at 1/11/2009 09:40:00 PM No comments:
Labels: साभार : www.dainikee.com
नयाँ यहाँ केही लेखेको छैन। www.dainikee.com विचार खण्डमा हरेक आइतबार लेखेको छु।
बिजनजीको सल्लाहमा बूढीको पनि तस्बिर राखेको।
Posted by Govinda at 1/07/2009 05:37:00 PM No comments: